B-35-2 Lehiny: 1650mm (L) * 825mm (W) * 630 / 1285mm (H) Fomba fiasa lehibe: sehatra fandriana vita amin'ny rindrina vita amin'ny zotra, vita amin'ny alàlan'ny aluminium alika; 2. Famerenan'ny miverina 0 ~ 45 °, izay azo tanterahina amin'ny crank; 3. Ny alàlan'ny mpiambina aluminium alefan'ilay lamasinina miaraka amina haingam-pandrefesana.
A-5 A1-standard Configurations ○ Kodiarana iray amin'ny loham-baravarana HDPE sy tongony pair Kodiarana iray vita amin'ny sisiny alumini allie mametaka system rafitra crank torolàlana (3) holes IV lavaka Pole (4) rain kitapo famafazana (4) ○ Fonja afovoany manankarena. castors (4)
A-1 A2-standard Configurations ○ Kodiarana roa amin'ny loham-paty sy tongony HDPE ○ Antso vy vita amin'ny sisin-dàlana vita amin'ny vy ○ rafitra crank torolàlana (3) holes IV lavaka Pole (4) ○ kitapo fandrefesana (4) ○ Mpanapaka hidy mihidy. (4)
A-1 A1-standard Configurations ○ Làlan-tsoratry ny loha sy ny tongony HDPE ○ sisin'ny sisina HDPE misy damping (4) ○ rafitra crank manual (3) ○ IV lavaka Pole (4) ○ kitapo fandoroana (4) castors (4)